ထိန်းယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / Functions များနှင့်တာဝန်ခံ Template ကို – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / ထိန်းယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / Functions များနှင့်တာဝန်ခံ Template ကို
ထိန်းယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / Functions များနှင့်တာဝန်ခံ Template ကို
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized မှတ်ချက် Leave 239 views
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမိသားစုများအတွက်သားသမီးများ၏စောင့်ရှောက်မှု ယူ. ဆိတ်သငယ်ရဲ့ Emotion ဖြည့်ဆည်းအကူအညီနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကို, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, ပညာတတ်, နှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအလိုဆန္ဒများ. လုပ်ငန်းတာဝန်များတစ်ခါတစ်ရံတွင်ညစာပြင်ဆင်နေခြင်းနှင့်ရေချိုးခန်းပါဝင်နိုင်ပါသည်, prep နှင့်အဝတ်အစားအာရုံစူးစိုက်မှု, ပျော်မွေ့လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ခရီးစဉ်၏ကုမ္ပဏီ, စည်းကမ်း, အသိဉာဏ်စိတ်လှုပ်ရှားမှု, ဝေါဟာရများလှုပ်ရှားမှုများ, နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး.
ပထမဦးဆုံးအကူအညီသို့မဟုတ် cardiopulmonary resuscitation execute (CPR) မျှော်လင့်ထားသည့်အခါ.
ပွငျဆငျပွီးမုကူညီရန် Enable နှင့်သားသမီးတို့အဘို့အာဟာရ-မျှတသောအစားအစာများ.
ဘေးကင်းလုံခြုံအပြုအမူအတွက်ကလေးများအကြံပေး, ဥပမာအားအဆက်အသွယ်ရှောင်ရှားအရွယ်ရောက်အကူအညီများရှာကြံသို့မဟုတ်မလုံခြုံအရာဝတ္ထုကို အသုံးပြု. ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်လမ်းပေါ် spanning သည့်အခါ.
စီစဉ်ခြင်းနှင့် carryout အသက်အရွယ်-သင့်လျော်သောပြင်ပအပန်းဖြေ, ထိုကဲ့သို့သောဂိမ်းအဖြစ်, အနုပညာနှင့်လက်မှုပညာ, အားကစား, လူတန်းစားပေါင်းစုံ, နှင့် play-ရက်စွဲများ.
ကလေးတွေကိုကြည့်ပါ’ ပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်. လုပ်ရပ်များ, အပူချိန်စဉ်းစားပါ, ဆရာဝန်မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကလေးများ, သို့မဟုတ်ဆေး dispense, အာရုံစူးစိုက်အဖြစ်, လူငယ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့’ ကျန်းမာ.
မိဘများအကောင်အထည်ဖော်ရန် Assist နှင့်လိုချင်သောကလေးကအပြုအမူမြှင့်တင်ရန်ထိန်းချုပ်မှုအစီအစဉ်များကိုဖွင့်တည်ဆောက်နိုင်ရန်.
မှန်ကန်သောအိမ်မှုဝေယျာဆုံးဖြတ်ရန်နှင့် selfcontrol ၏တိုးတက်မှုအားပေးဖို့အာရုံစိုက်အပြုအမူတွေကိုဆုချ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု, နှင့်တာဝန်ယူမှု.
တက္ကသိုလ်များမှပို့ဆောင်ရေးကလေးများ, လူမှုရေးဖြစ်ကြောင်း outings, နှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစည်းအဝေးများ.
ရှိခြင်းဥပမာများ၏တိုးတက်မှုအတွက်လူငယ်တွေကိုတို့ကိုသွန်သင်ခြင်းနှင့်ပဲ့ပြင်, slumbering, နှင့်ရေချိုးခန်းလုပ်ရပ်များ, ကျန်းမာရေးအာမခံနှင့်စိတ်ကြိုက်အလေ့အထများ.
ဥပဒေကြမ်းငွေပေးချေ၏ဖိုင်တွေကိုထိန်းသိမ်း, အစားအစာကြိမ်, နှင့်ပျော်မွေ့.
ခေတ်-သင့်လျော်သောလှုပ်ရှားမှုများလုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်, ထိုကဲ့သို့သော panel ကိုပျော်မွေ့ဥပမာအဖြစ်, လေ့လာနေ, နှင့်အနုပညာနှင့်လက်မှုပညာလူငယ်၏ဆင်ခြင်တုံတရားတိုးတက်မှုအားပေးဖို့.
Active ကိုနားထောင်ခြင်း-ရန်အခြားလူများပြည့်စုံအာရုံကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်ဘယ်သို့ပြောသည်ကို,, created ခံရအသေးစိတ်နားလည်ရန်အချိန်ကို အသုံးပြု., မှန်ကန်သောအဖြစ်မေးခွန်းများကိုမေးမြန်း, နှင့်မလျော်ကန်ဖြစ်ကြောင်းအချိန်လေးမှာ mesmerizing ဘယ်တော့မှ.
ထိထိရောက်ရောက် data တွေကိုဖော်ပြအခြားသူများ chatting-Talking.
critical အတွေးအခေါ်-အလုပ်သမားယုတ္တိဗေဒနှင့်အတွေးအခေါ်များများ၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အားနည်းချက်များကိုဖော်ထုတ်ရန်ထင်, ဒုက္ခမှအခြားရွေးချယ်စရာကုစားသို့မဟုတ်ချဉ်းကပ်မှု.
အခြေအနေကနည်းပြတငျပွမဟာဗျူဟာ-ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အလုပ်သမား educationANDtutorial ချဉ်းကပ်မှုနှင့်ကုသမှုသင်ယူခြင်းသို့မဟုတ်အသစ်ဖြစ်ကြောင်းကိစ္စများကျွမ်းကျင်လာသောအခါ.
ကုမ္ပဏီများစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး-TrackingPEREvaluating ထိရောက်မှု, သည်အခြားပုဂ္ဂိုလ်များ, သို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုမှန်ကန်သောခြေလှမ်းများကိုစဉ်းစားသို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကိုဖန်တီးရန်.
လူမှု othersI သဘောထားတွေကိုမသိအမြင်-ဖြစ်ခြင်းနှင့်သူတို့လုပ်ပေးနေချိန်မှာသူတို့တုံ့ပြန်ဘာဖြစ်လို့နားလည်ခြင်း.
Service ကိုအရှေ့တိုင်းဆန်-positive ပုဂ္ဂိုလ်များကို enable ဖို့နည်းလမ်းတွေရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေ.
အဆင့်မြင့်ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်-ခွဲခြားရှုပ်ထွေးအခက်အခဲများနဲ့ options အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်ဆန်းစစ်နှင့်အခြားနည်းလမ်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နှင့်ဆက်စပ်ကြောင်းအသေးစိတ်ကို critiquing.
စစ်ဆင်ရေးအားသုံးသပ်ခြင်း-စစ်ဆေးအလိုဆန္ဒများနှင့်ကုန်သွယ်လိုအပ်ချက်တစ်ခု layout ကိုအောင်.
အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဖို့အလေးအနက်ထားလိုအပ်ဂီယာရွေးချယ်ရေး-ဖော်ထုတ်ခြင်း tools များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများရဲ့ type ကို.
အရစ်ကျ-Installing applications များ, စက်, cabling, ယေဘုယျအားဖြင့်လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းဖို့ဒါမှမဟုတ် Device များ.
မြောက်မြားစွာဖြစ်ကြောင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့် ပတ်သက်. encoding-ရေးသားကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များ.
ခြေရာခံခြင်းသည်-ကိုကြည့်ရှုခြင်း dial စစ်ဆင်ရေး, ညွှန်ကိန်းများ, သို့မဟုတ်နောက်ထပ်အချက်ပြသင့်လျော်စွာဖျော်ဖြေကာပစ္စည်းကိရိယာများလည်းမရှိကြောင်းသေချာစေရန်.
function နဲ့ကိုငျတှယျ-ထိန်းချုပ်ခြင်း devices များသို့မဟုတ်အစီအစဉ်များ၏စစ်ဆင်ရေး.
ကို Maintenance-ကွပ်မျက် tools များအပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်အခါ upkeep ဘယ်လိုလိုအပ်သောဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း.
လိုအပ်သောပစ္စည်းကိရိယာများအသုံးချဖို့ပွငျ-ပြုပြင်ခြင်း devices များသို့မဟုတ်မော်ဒယ်များ.
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏စမ်းသပ်သုတေသန-ပွုလုပျခွငျး, ပံ့ပိုးပေး, အရည်အသွေးကိုသို့မဟုတ်ထိရောက်မှုကိုတရားစီရင်ခြင်းငှါသို့မဟုတ်နည်းစနစ်.
analysis-ကိုစူးစမ်းအစီအစဉ်မျိုးလုပ်ဆောင်ရမယ်အဘယ်အရာကိုများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်လမ်းချိန်ညှိ, အခွအေန, နှင့် setting ကိုရလဒ်များကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ.
နည်းလမ်းများအားသုံးသပ်ခြင်း-ကိုစူးစမ်းနည်းလမ်းများသို့မဟုတ် system ကိုစွမ်းဆောင်ရည်၏လက္ခဏာများအဖြစ်လုပ်ရပ်များတစ်ဦးတိုးတက်လာဖို့လိုအပ်ကြောင်းသို့မဟုတ်ညာဘက်ထိရောက်မှုရှိခဲ့, စက်၏ရည်ရွယ်ချက်မှဆွေမျိုး.
ဝင်ငွေ task ကိုဖျော်ဖြေရှိသည်ဖို့အသုံးကြလိမ့်မည်ကိုဘယ်လိုချွေတာသုံးစွဲ-ကိုစူးစမ်း၏အုပ်ချုပ်ရေး, ဤကုန်ကျစရိတ်များအတွက်စာရင်းကိုင်.
ကုန်ပစ္စည်းနည်းလမ်းများ-မြင်နေ၏ကြီးကြပ်မှုနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏သင့်လျော်ပါသည်ရန်လာပြီ, အင်္ဂါရပ်များ, နှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများမရွေးအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့.
ဝန်ထမ်းရေးရာအရင်းအမြစ်များ-ရယူ၏ကြီးကြပ်မှု, အားတက်စရာ, သူတို့အလုပ်လုပ်နေစဉ်အတွင်းရှေးရှေးရည်မှန်း, သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အများအတွက်အထိရောက်ဆုံးရှေးရှေးအဆုံးအဖြတ်.
High School တွင်ဘွဲ့ (သို့မဟုတ် GED သို့မဟုတ် High School တွင်ညီမျှသောလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး)
ကျော်လွန် 1 နှစ်, လှည့်ပတ် 24 လနှင့်အပါအဝင်,
ထိန်းချုပ်ရေး – %
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်မှု – %
adapter / လွတ်မြောက်ရေး – %